Waa maxay kaygen iyo crack iyo patch??????
Subject: Waa maxay kaygen iyo crack iyo patch?????? Wed Mar 17, 2010 6:37 pm
horta walaalaayaasha waan wada salaamay walaalayaal suaasheeda waxaa waaye aniga marwalbo markaan barnaamij dagsanaayo waxaan arkaa kaygen iyo crack iyo patch iyo serial number marka farqiya u dhaxeeyo maxaa waaye adinkoo mahadsan waxaan filayaa walaalah inay isiin doonaan jawaab dag dag ah salaaamu calaykum
Subject: Re: Waa maxay kaygen iyo crack iyo patch?????? Fri Mar 19, 2010 3:33 pm
Horta shirkad walbo oo barnaamij sameeso waxay u sameesa in ay lacag ka hesho oo gad gadato, ma xumo hadii qof walbo uu heli karo goormuu u gadmaa wexeed saas darteed waxay u sameeyeen wax ay ku xeraayaan barnaamijyadood, si nin walbo mid gaar uu u lahaado oo nuskhadiisa uu ku sajilanaayo (rasmi ooga dhigayoo, yacnii inuu gatay cadeeneeso oo beesada laga shabiyay ahahhahaha), kaasne waxaa la dhahaa Serial Number ama CD Key ama Registration Code.
Sidoo kale shirkadda mar walbo oo ay wax soo saarto si ay u suuq geeso (Boorsamiinto in ay sameeso, sida filimada oo kale) sidaas darteed waxay dadka siiyaan 30 maalin oo tijaabo si ay iskaga tijaabiyaan barnaamiijka waxa laga sheegay in uu qabanaayo, 30 kaas maalin kadibne uu gato (li'ana barnaamijka waa is xeraa), kuwa qaarne tijaabadood 30 maalin xataa waa ka yar wal ciyaadu bilaah.
Marka maadaamaa computerada la wada bartay shirkada hadda waa ku daadsantahay:
1. Crack aa la sameeyay oo eh file la prograameeyay si 30-ka ama 7-da maalin ee barnaamijka boorsamiintada (Trial) kuu yahay ka dhigaayo wax aa soo gadatay oo kale, bes waa dagsanee (Crack) waxaa dhax gilinee folder-ka barnaamijka
2. Patch aa laba qeyb eh:
a) waxaa ku jiro macluumaadka hal qof oo lacagta laga shabiyay, oo macnahaa barnaamijka aa isticmaaloosid gatay, sidaas darteed file-ka patch-ka markaa isticmaashid wuxuu computer-kaa ku shubaa macluumaadka qofkaas, adine barnaamijkaa wuxuu kuu naqanaa wax aa gadatay (Macluumaadka waxa waaye: Name iyo Registration Code oo eh waxa lacagta loo dhiibo)
b) qeybta labaadne waxa waaye programming toos eh barnaamija meesha boorsamiintada ka eh in toos loo bedelo oo marka aa Patch dhahdid trial-ka uu kaa tirtiraa, wax aa gadatay uu kaaga dhigaa.
3. KeyGen asaaa oogu fudud waxaa waaye waxaa la heli shirkada qaabka ay usoo saarto CD-Key ama Serial sidaas darteed qaabkaas asoo la isticmaalaayo aa waxaa lasoo saaraa inta CD-Key barnaamijkaas uu lahaan karo xataa inta ay shirkad gadin aa laa hormaraa.
Marka kulli jidadka lee kala duwan laakin hadafka waxa waaye in barnaamij walbo aa isticmaashid adoo gadanin.
Iga raali noqo waa kugu dheereeyay laakin inaa fahantay aa u badinaa.
Subject: Re: Waa maxay kaygen iyo crack iyo patch?????? Fri Mar 19, 2010 5:54 pm
walaal zaaid ayaad oogu mahaad santaahy walaahi zaaid ayaan oogu faaidaystay jazaakalaahu qeer
Subject: Re: Waa maxay kaygen iyo crack iyo patch??????